နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ပြေးလမ်းပေါ်က အလင်းရောင်
Bravo! ပါ... သိပ်ကောင်းပါတယ်..
ဒီလို ၀တ္ထုလေးကို ဖန်တီးတတ်တဲ့ သိင်္ဂါကို တော်တော်ချီးကျူးသွားမိပါတယ်..
သိင်္ဂါရေ ဘာသာပြန်ဝတ္တုကို နာမည်ပြောင်းပြီး ရေးထားတယ်လို့တောင် ထင်ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မဂ္ဂဇင်းတခုခုထဲက ပြန်ကူးပြီးဖေါ်ပြထားတယ် ထင်နေတယ်။ သိင်္ဂါက စာပေ၊ အနုပညာကို တကယ်ဖန်တီးတတ်တယ်နော့် ကောင်းလိုက်တာ၊ ဒီလိုမျိုး အစ်မလည်း ရေးတတ်ချင်လိုက်တာ တကယ်ပဲ။
စုံထောက်ဇာတ်လမ်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင် ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းတစ်ကားဖြစ်မှာ သေချာတယ်။
စိတ်ဝင်စားလို့ တစ်ပုဒ်လုံးကိုအစအဆုံး တစ်လုံးမကျန် ဖတ်နေမိတယ်။
အရမ်းကောင်းတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဘယ်လောက်ဘဲသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဖြစ်မယုံရဘူးဆိုတာ သင်ခန်းစာရခဲ့ပါတယ်.။ နောက်ထပ်အသစ်တင်တဲ့ ပို့စ်တိုင်း ဖတ်လို့ရအောင် လင့်ခ် ယူသွားတယ်နော်.။
ကောင်းလိုက်တာ။ ခုနက အစလေးဖတ်ပြီးသား။
ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့စည်းမှု။ စကားလုံး။ အချိတ်အဆက်အားလုံးကွက်တိပဲ။ဘာမှကို
ဆိုင်မှာဆို လွယ်ဖူးး) စာရေးဆရာမဖြစ်တော့မယ်
အချိတ်အဆက်မိမိနဲ့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သရုပ်ဖော်သွားနိုင်လို့ ဖတ်ရတာ ကျေနပ်မိတယ်...
တခုပဲ ရှိတယ် ပရိတ်သတ်က တရားခံကို အစောကြီးသိသွားတော့ တရားခံရှာတဲ့ အကွက်တွေကိုပဲ အဓိကထားပြီး ဖတ်ရတော့တယ်...
လူသတ်သမားကို ခန့်မှန်းလို့မရခဲ့ရင် ပိုပြီး သဲထိတ်ရင်ဖို ဖြစ်ဖို့ကောင်းမယ် ထင်တယ်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ကတော့ ဒါမျိုးတွေ မရေးတတ်တော့ ရေးတတ်တဲ့ ဆရာမကို ချီးကျူးပါတယ်...
(မေဦးခင်အကြောင်း စာပိုဒ်မှာ “ပရိုပိုစ့်” နဲ့ “ယောက်ျား” လို့ ပြင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဗျ)
သေသူ ဓားထိုးခံရတဲ့ နေရာက မပေါ်လွင်နေဘူး...
နောက်ပြီး သူပြန်ရောက်လာလာချင်းမှာ သူ့ဆီကို ရဲကားတွေ ရောက်လာတာ စောလွန်းနေမယ် ထင်တယ်...
သူသာ ချက်ချင်း ထွက်ပြေးဖို့ ကြံစည်မယ် ကြံရင် ရဲတွေက တရားခံဟာ သူဖြစ်မှန်း မသိနိုင်သေးဘူးလေ...
ဒီရုံးခန်းကို နောက်လူထပ်မရောက်ရင် လူသေတာတောင် တော်တော်နဲ့ အကြောင်းကြားဖြစ်မယ် မထင်ဘူး...
(ပိုကောင်းစေချင်လို့ ပြောချင်းသာ ဖြစ်ပါသည်)
ရဲတွေကို အကြောင်းကြားတဲ့ သူက ခွန်မင်းပါ.. အဲဒီ အကြောင်းကို ထည့်မရေးမိဘူး.. :D
ှSuggestions တွေ အတွက် ကျေးဇူး...
ဇာတ်အိမ်ထဲမျှောပါသွားတယ်။ စာရေးအရမ်းကောင်းတယ်နော် :)
ဒီဝတ္တုလေးလည်း တအားဖတ်လို့ ကောင်းတာပဲ.. စာရေးကောင်းတယ်။ နောက်လည်း ဒါမျိုးလေးတွေ မျှောနေမယ်နော်..
မ ရေ သမီးလဲ အဲလိုမျိုးလေး ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာ ချိတ်ဆက်မမိသေးလို့ မ ဆီလာလာပြီးပဲ စာဖတ်နေရတယ် ဟွင့်
မမရေ မမ စာရေးနည်း တွေးနည်းလေးတွေ သင်ပေးပါဦးလားလို့ ဒီညီမလေးကို ပစ်မထားနဲ့လေ ဟင့်
မိုက်တယ်မမ အချိတ်ဆက်မိတယ် ကြိုက်တယ် ဗျိုးးးးးးးးး
ထမင်းစားနေရင်းနဲ့ ထမင်းတောင် ဆက်မစားနိုင်တော့ဘူး ဇာတ်လမ်းထဲ မျောသွားတယ် ဟိဟိ
ဟိ မေဦးခင်ကို ခင်ဦးမေ ချည်းဖတ်တယ် ဟိဟိ မခင်ဦးမေတော့ ခေါင်းကြိမ်းနေရော့မယ် ဟိဟိ
မြန်မာပြည်မှာ လျှို့ဝှက်သဲဖိုဇာတ်လမ်းရေးနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးစာရေးလက် အလွန်ရှားပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။
အဆုံးထိကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်လိုက်တယ်။ တော်တော်ကောင်းတယ်။ နေကောင်းမှ တစ်ခေါက်ပြန်လာဖတ်မယ်။ လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဇာတ်လမ်းလေးတွေ မဖတ်ရတာကြာပြီ။
ဆားပုလင်း နှင်းမောင် နဲ့ အမျိုးတော်သလားဟင်
ဒီလို စုံထောက်ဝတ္တုတွေရေးတဲ့ ဘလော့ အခုမှသိတယ်။ လင့်ခွင့်ပေးပါ။ အရမ်းကြိုက်တယ်။ စုံထောက်ဝတ္တုမှန်သမျှအကုန်ဖွပီးသွားပီ
တခါတည်းမဖော်ပဲနဲ့ နောက်ဆုံးမှဖော်ပါလား..စာဖတ်သူကိုပိုရင်ထိတ်စေတယ်.. သို့သောသို့လော တွေးခွင့်ပေးပါနော
ပီးတော့ သူငယ်ချင်း၃ယောက် ဇာတ်လမ်းတိုင်းမှာ၁ယောက်ယောက်ကပါဝင်ပီးမကောင်းတာမျိုးဆိုတော့ ပထမတော့ ၁ပုဒ်ထဲဖတ်ရင်တရားခံမှန်းရခက်တယ်။နောက်ကျတော့၃ယောက်ဇာတ်လမ်းကအခြေခံတာ၃ပုဒ်လောက်ဖြစ်လာတော့ တရားခံကိုစာဖတ်သူကမှန်းလို့ရသွားတယ်။ အကြံပေးတာပါနော်။ ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်ဆို ဝတ္ထုရှည်လေးတောင်မှ ဖြစ်သင့်တာ..
ဒါပေမဲ့. . နားလည်ပါတယ်ဗျာ..၊
စကားလုံးတွေ ဒီထက် ကျစ်လျစ်လိုက်. .သူငယ်ချင်း..
သိင်္ဂါကျော်ကွ ဘာမှတ်နေလဲ ဖြစ်ပြီ..ဟိဟိ။
အင်း.. မဟုတ်မှ လွဲရော
စုံထောက်ကနေ လာတာထင်တယ်..း-)
ဒီလိုဝထ္ထုကို ဖတ်တီးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူးဗျာ
မလွယ်တဲ့အရာကို ဖန်တီးထားတဲ့ အမကို ချီးကျူးပါတယ်
အရင်ကဆို မင်းမြတ်သူရတို့ မင်းသိင်္ခစာအုပ်တွေကို အရမ်းဖတ်တာ...
ဇာတ်လမ်းကို ပီပီပြင်ပြင်စေ့စေ့စပ်စပ် ပြင်ဆင်ထားတာ တကယ်တော်တယ်ဗျာ...
စုံထောက်ဝတ္ထုတွေ ရေးတဲ့ဘလော့လေး အမှတ်မထင် တွေ့ရတော့ သိပ်သဘောကျသွားတယ်။
အမကလဲ ဦးစံရှားကို အရည်ကျိုပြီး CSI ကို နေ့တိုင်း ကြည့်နေသူပါ။ စုံထောက်ဝတ္ထုဆို သိပ်စိတ်ဝင်စားတယ် လို့ ပြောချင်တာပါ။ ရေးတော့ မရေးတတ်ဘူး။
ဒီဇာတ်က အစ်မရေးတတ်တဲ့ တင်ပြပုံနဲ့ မလိုက်ဘူး အစ်မ။ Suspense ပျောက်သွားတယ်။ တ၀က်မှာ အကုန်ပေါ်သွားတာကိုး။